Amadoda amashele ukuhlukunyezwa kwabesifazane | News24
Amadoda amashele ukuhlukunyezwa kwabesifazane
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaKungesikhathi amadoda eyingxenye yemashi emelene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.
IMEYA kaMasipala uMsunduzi uKhansela Themba Njilo uthi bazimisele ukulwisana nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane.
UNjilo ubekhuluma kanje ngoMsombuluko mhla zili-17 kuZibandlela (December) nalapho kade ehola khona imashi yamadoda yokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Le mashi isuke emgwaqeni u-Retief Street yaze yayophelela e-City Hall nalapho befike baba khona nohlelo olubizwa ngokuthi yi-Father and Son Programme okulapho obaba bethole khona ithuba lokuxoxisana namadodana abo futhi bewafundisa ngokukhula babe ngamadoda angempela angabahlukumezi abantu besifazane.
UMnuz Njilo, naye obehamba nendodana yakhe uPhumlani Njilo, uthe kuyamjabulisa kakhulu ukuthi bengumasipala bakwazi ukuthi babe nohlelo olufana nalolu.
“Ngalolu hlelo sizama ukukhulisa izingane zethu zabafana ukuba zibe ngamadoda siphinde sizame ukulwisana nezidakamizwa kanye nobugebengu endaweni yethu yaseMsunduzi. Siyazi sonke ukuthi kuthatha isizwe sonke ukuthi ukhulise ingane yingako nathi senza uhlelo olufana nalolu.
“Okujabulisa kakhulu ukuthi senza lolu hlelo ngemuva kwezinsukwana kuphele umkhankaso owaziwa ngokuthi yi-16 Days of Activism nolwiswana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane, kodwa lokho akusho lutho kuthina ngoba sizimisele ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Izingane zethu zabafana kumele sizifundise ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kahle, uyahlonishwa futhi akahlukunyezwa.
“Sinawo umnyango kumasipala wethu obhekelele ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kanti ngizobalandelela ngemuva ukwenza isiqinisekiso sokuthi bayaphuma baya emiphakathi bayosiza labo abayizisulu zokuhlukunyezwa. Inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi abantu besifazane abaningi abakhulumi ngokuhlukunyezwa kwabo kanti lokho kuyabalimaza kanti futhi kulimaza nabanye ngoba lowo muntu ohlukumezayo uzolokhu eqhubekile.
“Sinxusa abantu ukuba mabaphumele obala bakhulume ngokuhlukunyezwa ukuze abenzi bobubi bezojeza,” kubeka yena.
UMfundisi Khomo obeyingxenye yalolu hlelo ehambisana nendodana yakhe, uMthobisi Mathenjwa, uthe kubaluleke kakhulu ukuba bona bengobaba baxoxisane nezingane zabo zabafana.
“Likhulu iqhaza izingane zethu ezingalibamba ekulwisaneni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Abantu besifazane badinga ukuhlonishwa ngoba singamadoda sizalwa ngabantu besifazane, sinabodadewethu kanti futhi sishada yena umuntu wesifazane.
“Isihluku ekuhlukunyezwa ngaso abantu besifazane siyadabukisa. Ngalolu hlelo sifuna ukwazi ukuthi kungabe lento ibangelwa yini ngoba ngezikhathi zethu sisakhula kwakungekho konke lokhu kuhlukumeza,” esho.
Indodana yakhe, uMthobisi, ibeke kanje: “Nathi siyintsha singasiza ekulwisaneni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Uma singashintsha indlela esenza ngayo sihloniphe abantu besifazane yonke into ingalunga.”